Eyona Akhawunti yoKusebenza ngeSabelo e-UK - IsiKhokelo samahala kaJanuwari ka-2022
Eyona Ndawo ye-UK yabelana ngeAkhawunti eziSebenzayo ze2021
Ukuba uhlala e-UK kwaye unqwenela ukutyala imali kwiimarike zesitokhwe, kuyakufuneka uvule iakhawunti yokujongana nesabelo. Babanjwe ngabathengi be-intanethi abanokufikelela ngokuthe ngqo kwiinkampani ezidweliswe esidlangalaleni. Ukubuyisa, kuya kufuneka uhlawule umrhumo ngalo lonke ixesha usenza utyalo-mali.
Oku kuhlawuliswa xa uthenga okanye uthengisa isitokhwe kwaye zinokutshintsha okanye zilungiswe. Nangona kunjalo, ngamakhulu ezabelo ezisebenzisana neeakhawunti ngoku ezifumanekayo e-UK, kuya kufuneka ukhethe iqonga elihlangabezana ngokufanelekileyo neenjongo zakho zotyalo-mali lwexesha elide.
Kananjalo, singacebisa ukuba sifunde isikhokelo sethu kwii-Akhawunti eziBalaseleyo ze-UK zokwabelana ngeAkhawunti ze-2021. iakhawunti.
Qaphela: Ukuba ujonge ukutyala imali kwizabelo, kuya kufuneka ulungele ukukhwela amaza aneqhina. Umgaqo ngokubanzi wesithupha ubambe kutyalo-mali lwakho iminyaka emihlanu ubuncinci.
Zithini iiAkhawunti zokuSebenza eziSebenzayo?
Ukuze uthenge kwaye uthengise izabelo kwi-Intanethi, kuyakufuneka usebenzise umthengisi-sitokhwe. Xa uvula iakhawunti kunye nomthengisi wamasheya ngale njongo, uya kuba uvula iakhawunti yokujongana nesabelo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iiakhawunti ezisebenzisanayo azisetyenziswanga kuphela thenga uthengise izitokhwe. Ngokuchasene noko, bakwavumela notyalo-mali kwiingxowa mali ezifanayo, iibhondi, ETF, kwaye indices.
Kananjalo, iakhawunti yakho ethengisa izabelo yindawo ekuma kuyo yonke indawo kwipotfoliyo yakho yotyalo-mali. Ngokwezinto ezisisiseko, iiakhawunti ezininzi ezisebenza ngesabelo zisebenza ngendlela efanayo. Umzekelo, kuyakufuneka uvule iakhawunti, uqinisekise isazisi sakho, kwaye emva koko ubeke imali. Emva koko, uyakucelwa ukuba ukhethe utyalomali lwakho kwisiseko se-DIY.
Oku kuthetha ukuba uyakufuna ukuba nenxalenye yolwazi kwiimarike zesitokhwe ukuze ukwazi ukubona iinkampani ezinokubakho. Ngale nto ithethwayo, abathengisi be-newbie yeyona nto ilungileyo ukuba banamathele kwi-mutual fund, njengoko ingxowa-mali iya kukhetha kwaye ikhethe ukuba yeyiphi i-asethi oza kutyala kuyo.
Xa kuziwa kwimirhumo, isabelo sokujongana neeakhawunti zihlala ziza nekhomishini eguqukayo okanye esisigxina yorhwebo. Malunga neyangaphambili, uya kuhlawula ipesenti yemali oyityalileyo. Umzekelo, ukutyala imali eyi-1,000 1 kwizabelo ze-Apple kwi-10% kunokukuhlawula umrhumo we- $ XNUMX. Ukuba ngumrhumo omiselweyo, ikhomishini iya kuhlala injalo nokuba utyala imali kangakanani. Okungakumbi koku kamva.
Iinkonzo kunye neengozi zoKwabelana ngeeAkhawunti eziSebenzayo
Thenga kwaye uthengise izitokhwe kunye nezabelo ezivela kwinduduzo yekhaya lakho
Unokutyala imali kwezinye iiasethi ezinjengemali ezihlangeneyo, iibhondi kunye nee-indices
Imirhumo ngoku ikhuphisana kakhulu kubathengi
Isahlulelo sihlawulwa ngokuthe ngqo kwiakhawunti yakho yokujongana nezabelo
Qhagamshela iakhawunti yakho yokujongana nesabelo kwi-ISA
Ithatha ngaphezulu kwemizuzu eli-10 ukuvula iakhawunti
Idiphozithi kwaye urhoxise imali nge-akhawunti okanye ebhankini
Iiakhawunti zase-UK zilawulwa yi-FCA
Ukungakwazi ukuthengisa ngokufutshane iiasethi okanye ukusebenzisa amandla
Iindidi zoTyalo-mali kwiAkhawunti yokuSebenza ngeSabelo
Njengoko igama lisitsho, iakhawunti yokujongana nesabelo ikuvumela ukuba utyale imali kwizabelo. Nangona kunjalo-kwaye njengoko sele siphawulile ngasentla, unokutyala imali kuluhlu lwezinye iiklasi zeeasethi.
Apha ngezantsi sidwelise ezona ntlobo zixhaphakileyo zotyalo-mali ezabelana ngemvume yokujongana neeakhawunti.
Izabelo ezidweliswe e-UK
Indawo yokuqala ebonakalayo ziinkampani esidwelise esidlangalaleni e-UK. Ukuba kunjalo, baya kudweliswa kwiLondon Stock Exchange. Cinga ngemigca yecuba laseBritane laseMelika, iBP, iBarclays, kunye neLloyds. Uninzi lweeakhawunti ezisebenzisanayo ziya kukunika ukufikelela kwilayibrari yonke yeenkampani ze-FTSE 100, ke maninzi amathuba okuhluka.
Ngokufanayo, ukwabelana ngeakhawunti ngokuhlala kukunika ukufikelela kwi-AIM. Kulabo abangaziyo, oku kukutshintshiselana okusekwe e-UK okudwelise iinkampani ezincinci ukuya kweziphakathi ezingabalulekanga ngokwaneleyo kwiLondon Stock Exchange. Izitokhwe kwi-AIM zihlala zizinzile kwaye zihlupheka ukusuka kumanqanaba asezantsi okugcina imali, ke gcina oku engqondweni.
Izabelo zamanye amazwe
Ukuba ujonge ukwahluka kwiimarike ezingezozase-UK, uyakonwabela ukwazi ukuba uninzi lwezabelo zokujongana neeakhawunti ziyakuvumela oku. Kwiimeko ezininzi, umrhwebi uya kukunika ukufikelela kwiimarike ezinkulu ezimbini zase-US- i-NASDAQ kunye neNew York Stock Exchange.
Nantsi indlela oza kukwazi ngayo ukutyala imali kwiinkampani ezinje ngeApple, Facebook, Ford Motors, Disney, kunye neNike. Kubalulekile ukuba ujonge iifizi ezijikeleze utyalomali lwesitokhwe samanye amazwe. Kuya kufuneka uhlawule umrhumo owongezelelweyo ukuhlawula iindleko zotyalo-mali kwimali engeyiyo i-GBP, nayo.
Index Isalathiso (ii-Indices)
Izalathiso (okanye ii-Indices) zikuvumela ukuba utyale imali kwiimarike ezibanzi zesitokhwe ngaphandle kokukhetha iinkampani ezizodwa. E-UK, isalathiso esikhokelayo seso se-FTSE 100. Kwabo bangaziyo, oku kubandakanya iinkampani ezili-100 ezikhulu ezidweliswe esidlangalaleni kwiLondon Stock Exchange.
Ke, endaweni yokuba uthenge i-100 yezabelo, unokutyala imali kuzo zonke iinkampani ezili-100 ngentengiso enye. Esona salathisi silulwelo ehlabathini yi-S & P 500, elandelela iinkampani ezingama-500 ezinkulu ezidweliswe e-US. Emva koko unayo iDow Jones, elandelela iinkampani ezinkulu ezingama-30 ezivela kumacandelo ahlukeneyo.
Ukuba awunamava okanye ulwazi lotyalo-mali, siya kuphakamisa ukuba siqwalasele ingxowa mali. Ngamafutshane, imali yokuthenga kunye nokuthengisa iiasethi egameni labatyali mali. Ngokudibanisa imali yakho kunye namawaka abanye abatyali mali, oku kunika ingxowa mali isifuba semfazwe esisigidi sezigidi.
Nangona kuya kufuneka uhlawule umrhumo omncinci wesondlo xa utyala imali ngengxowa mali, kufanelekile ukuba ulihlawule. Umzekelo, ingxowa-mali iya kuba neqela labatyali mali abanamava, abaya kuthi baxhaswe ngokupheleleyo ziitekhnoloji ezinqabileyo. Ngapha koko, ingxowa-mali ilawulwa ngokusebenzayo, ngenxa yoko uya kukonwabela iziqhamo zengeniso yokwenziwa.
Iibhondi kunye neeGilts
Umjelo ongezelelweyo wengeniso enokuthi iakhawunti yokujongana nesabelo iququzelele yile yeebhondi kunye neeGilts. Iibhondi zifuna utyalomali lwesambuku kunye nembuyekezo, uya kufumana iintlawulo zenzalo esisigxina de iibhondi zikhule. Xa besenza njalo, uyakufumana utyalomali lwakho lokuqala lubuyile ngokupheleleyo.
IiGilts zisebenza ngendlela efanayo neebhondi, nangona kunjalo, zikhutshwa ngurhulumente wase-UK. Kananjalo, nangona bengenamngcipheko, izivuno ekunikezelweni ziphantsi kakhulu.
Wabelana njani ngokuSebenza ngeAkhawunti?
Inkqubo yokuba nezabelo ayisiyonto ilula njengokungena kwiakhawunti yakho ye-stockbroker ekwi-Intanethi kunye nokuthenga. Ewe, yeyakho-kodwa ayisiyiyo yomrhwebi uqobo. Kungenxa yokuba okuninzi kuqhubeka ngasemva kwemiboniso. Phambili koku ubudlelwane bomrhwebi kunye neemarike eziphambili.
Uyabona, ukuze ukwazi ukuthengisa isitokhwe ngesabelo-ngesabelo, umrhwebi kuya kufuneka ahlangane nobuncinci besayizi.
Umzekelo, masithi umrhwebi ufuna ukuhambisa izabelo zeCuba laseMelika laseMelika kubathengi bayo.
Umrhwebi unokucelwa ukuba athenge izabelo ezixabisa i-500,000 yeerandi ukuze afikelele kwimarike yokuqala kwaye ke ahlawule amaxabiso afanayo nendawo yeziko.
Baya kuthi emva koko babe nakho ukuthengisa amasheya aseBritane aseMelika aseMelika ngeeakhawunti zabo zokuthengisa, bongeze uphawu lokuhamba apha endleleni.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba inani labarhwebi abatsha ngoku likuvumela ukuba uthenge amaqhekeza ezabelo. Oku akuvumeli kuphela ukuba wenze utyalomali ngaphandle kokophula i-bhanki, kodwa kwenza inkqubo yokwahlukana ibe lula kakhulu.
Yabelana ngeeakhawunti eziSebenzayo: Imirhumo kunye neeKhomishini
Abelana nabarhwebi beakhawunti abasebenza kwishishini lokwenza imali, ke kuya kufuneka uhlawule umrhumo xa usenza utyalomali. Oku kuhlala kuza ngohlobo lwekhomishini eyahlukileyo okanye umrhumo othe tyaba. Kubalulekile ukuba wazi umahluko phakathi kwezi zimbini, kungaphelelanga apho kuba oku kuyalela uhlobo lwesabelo ukujongana akhawunti obhalisela yona.
Commission Ikhomishini eyahlukeneyo
Ukuba umthengisi weakhawunti osebenzisana naye uhlawulisa ikhomishini eyahlukileyo, intlawulo yakho iya kubalwa ngokuchasene nobungakanani botyalo-mali lwakho. Umzekelo, masithi umrhwebi uhlawulisa iipesenti ezi-2 kurhwebo ngalunye kwaye unqwenela ukutyala imali kwizabelo ze-BP.
Uthenga izabelo ezixabisa amawaka amahlanu eepawundi kwi-BP
Kwikhomishini ye-2%, oku kufikelela kumrhumo we- $ 100
Kwiminyaka emine kamva utyalo-mali lwakho lwe-BP oluyi-5,000 7,500 ngoku lixabisa i- $ XNUMX, ke ugqiba kwelokuba uthengise izabelo
Kwikhomishini ye-2%, intengiso ye- $ 7,500 iya kuthi ifike kwi- $ 150
Njengoko ubona koku kungasentla, iikhomishini eziguqukayo zihlawuliswa kwiziphelo zombini zorhwebo- xa wena kuthenga kwaye nini thengisa. Ngokubalulekileyo, kuya kufuneka ukhethe ubume bemali eguqukayo ukuba ucwangcisa kuphela ukurhweba ngexabiso elincinci. Ngaphandle koko, utyalomali olukhulu luya kohlwaywa ngemirhumo enzima kakhulu.
F Intlawulo yeFlethi
Ukuba umthengisi osebenza ngeakhawunti uhlawula umrhumo othe tyaba, intlawulo ayinakuze itshintshe. Nokuba utyale i- $ 1 okanye i- £ 10,000- uyakuhlala uhlawula ngokufanayo. Le nto inokuba yiyo nantoni na ukusuka kwi- £ 5- £ 12 ngorhwebo ngalunye, ke kungcono ukuthenga ivenkile. Ngokwesiqhelo sifumanisa ukuba abathengisi bemali ephantsi banikezela ngenkonzo yolusu kunye namathambo.
Ngamanye amagama, uya kuba nakho ukuthenga izabelo onqwenela ukutyala imali kuzo, nangona kunjalo, awuyi kufumana nantoni na ngohlobo lophando, izixhobo zemfundo, okanye inkxaso ephezulu yabathengi. Ubume bemirhumo ethe tyaba ilunge ngakumbi kwabo baceba ukutyala imali eninzi. Oku kuyakugcina i yorhwebo ntengiso Iindleko kubuncinane beepesenti ngobulumko.
Eminye iMirhumo ekufuneka uyiqwalasele
Imali yoLondolozo yoNyaka: Ukuba uthatha isigqibo sokusukela umvuzo ongenayo ngokusebenzisa i-mutual fund, kuya kufuneka-kodwa-ngokuqinisekileyo uhlawule umrhumo wonyaka. Oku kunqabile ukuba ngaphezulu kwe-1% ngonyaka, kwaye ihlawuliswa ngokwexabiso elipheleleyo lotyalo-mali lwakho.
Intlawulo yeqonga: Umrhumo weqonga wahlukile kwimali yolondolozo lwengxowa mali, njengoko yimirhumo ehlawulwa ngokuthe ngqo ngumthengisi. Le yintlawulo ekufuneka uyihlawule ukusebenzisa iqonga, kwaye ihlala ihlawuliswa rhoqo ngekota okanye ngonyaka.
Iimakethi zamanye amazwe: Ngokungafaniyo namaqonga e-CFD, abarhwebi beakhawunti yokujongana nabathengi banokukuhlawulisa umrhumo wokufikelela kwiimarike zamanye amazwe ezinje ngeNew York Stock Exchange okanye iNASDAQ.
Ukuguqulwa kweMali: Ukuba uthatha isigqibo sokutyala imali kudidi lweeasethi ezingadalwanga kwi-GBP, kuyakufuneka uhlawule imali yokuguqula imali.
Uyivula njani iAkhawunti yokuSebenza ngeSabelo
Ukuba ukulungele ukuqala uhambo lwakho lotyalo mali ngokuvula iakhawunti namhlanje, ngoku siza kukubonisa into ekufuneka uyenzile
Inyathelo 1: Khetha uMthengisi weAkhawunti yokuThetha ngokuThengisa
Kuya kufuneka kuqala ukhethe i-stockbroker ekwi-Intanethi enikezela ngeakhawunti yokujongana nabatyali zimali base-UK. Ukuba awunalo ixesha lokuphanda ngomrhwebi ngokwakho, singacebisa ukukhetha elinye lamaqonga amahlanu esidwelise ngakumbi kwisikhokelo sethu.
Ukuba unayo ixesha, kuya kufuneka uthathele ingqalelo uluhlu lwezinto ngaphambi kokubhalisa. Oku kufuneka kugxile kummiselo, iifizi, iikhomishini, iindlela zokuhlawula, kunye neentlobo zeeasethi onokuthi utyale imali kuzo.
Inyathelo 2: Vula iAkhawunti yokuSebenza ngeSabelo
Ngoku kuya kufuneka uvule iakhawunti yokujongana nomthengisi wakho omkhethileyo. Ukuhambelana nemithetho yokuchasana nemali yase-UK, umrhwebi kuya kufuneka aqokelele ulwazi ngawe.
Inombolo yelayisensi yomqhubi (ukuba iyasebenza)
Ukuba uyazibuza ukuba kutheni umrhwebi kufuneka aqokelele ulwazi oluninzi, oku kungenxa yokuba baya kuzama ukuqinisekisa isazisi sakho ngombane. Ukuba abakwazi ukwenza oku ngemithombo yomntu wesithathu, unokucelwa ukuba ulayishe ikopi yepasipoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba, kunye nobungqina bedilesi.
Inyathelo lesi-3: Fundisa ngeAkhawunti yakho yokuSebenza ngeZabelo
Nje ukuba iakhawunti yakho yokujongana nesabelo isetiwe, kuya kufuneka uyixhase. Abanye abathengisi abakwi-Intanethi bayakukucela ukuba ufake imali encinci ngeakhawunti yakho yebhanki. Oku kukuqinisekisa ukuba ungumnini weakhawunti yokwenyani, kwaye ukunqanda nakuphi na ukulibaziseka xa kusiza kurhoxe ngakumbi emgceni.
Ukuba kunjalo, umrhwebi uya kunika iinkcukacha zeakhawunti yebhanki ekufuneka iimali zidluliselwe kuyo. Ngenye indlela, abanye abathengisi abakwi-Intanethi baya kukuvumela ukuba ubeke imali kwikhadi lakho ledebhithi. Oku kuhlala kukhokelela ekubeni imali ifakwe kwiakhawunti yakho ngoko nangoko, nangona imida ihlala iphantsi kakhulu xa kuthelekiswa nokudluliselwa kwebhanki.
Inyathelo 4: Khetha udidi lwakho lotyalomali olukhethiweyo
Ngoku ukuba uneakhawunti yomrhwebi exhaswa ngokupheleleyo, ngoku kuya kufuneka ucinge malunga noluphi utyalo-mali onqwenela ukulongeza kwipotifoliyo yakho.
Ukuba ujonga ukukhetha iinkampani zakho oza kutyala imali kuzo, khangela nje ubulungisa kwibhokisi yokukhangela.
Ngenye indlela, ukuba ufuna ukutyala imali kwezinye iimveliso zotyalo-mali ezinje ngeebhondi, ii-indices, okanye iimali ezihlangeneyo, yiya kwicandelo elifanelekileyo lewebhusayithi yomrhwebi.
Nje ukuba uchonge utyalomali onqwenela ukulwenza, kufuneka ufake nje isixa-mali ofuna ukusifaka ngeeponti kunye neepeni. Umzekelo, ukuba ufuna ukuthenga izabelo zeBarclays ezixabisa i-1,000 1,000, faka i- £ XNUMX kwibhokisi yoku-odola kwaye uqinisekise urhwebo.
Ukuba utyale imali kwii-asethi ezenza ingeniso-ezinje ngezabelo ezihlawula izabelo okanye iibhondi, iintlawulo zakho ziya kuthunyelwa ngqo kwiakhawunti yakho yemali yomrhwebi. Ungakhupha oku nangaliphi na ixesha.
Inyathelo 6: Ukufakwa kwemali kwi-Akhawunti yakho yokuSebenza ngeSabelo
Nokuba unganakho okanye ungabinakho ukutyala imali kutyalo-mali lwakho kuxhomekeke kwi-asethi. Umzekelo, izitokhwe kunye nezabelo zinokupheliswa nangaliphi na ixesha ngexabiso leemarike. Iimali ezihlangeneyo nazo zinamanzi ngokufanelekileyo, nangona unokufuna ukuhlangabezana nexesha elincinci lokuhlengwa.
Kwesinye isiphelo sebala, unokufumana kunzima ukukhupha utyalo-mali lwebhondi. Kungenxa yokuba uhlala ufuneka ukuba ulinde de iibhondi zikhule. Ekuphela kwendlela yokujikeleza oku kukuba ngaba umthengisi weakhawunti osebenzisana naye unokufikelela kwiimarike zesekondari.
Ungayikhetha njani iAkhawunti yoKusebenza ngeSabelo?
Ngamakhulu ezabelo ezisebenzisana neeakhawunti ngoku ezisebenzayo kwimakethi yase-UK, ukwazi ukuba ngowuphi umthengisi oza kungena naye kunokuba ngumceli mngeni. Kananjalo, singacebisa ukubuza le mibuzo ilandelayo ngaphambi kokuba ungene.
Ngaba umthengisi wempahla ulawulwa yi FCA?
Luluphi utyalo-mali onokuthi ulongeze kwiakhawunti yakho yokujongana nesabelo?
✔Ungayidibanisa iakhawunti yakho yokujongana nesabelo kwi-ISA?
Ngaba umrhwebi uhlawulisa umrhumo oguqukayo okanye ophantsi? Ixabisa malini iikhomishini?
Ngaba kukho naziphi na iifizi zokufikelela kwiimarike zamanye amazwe ezinje nge-NYSE okanye i-NASDAQ?
Ezona Akhawunti zoKusebenza ngeSabelo e-UK-Yeyiphi iBrokhwe egqwesileyo?
Awunalo ixesha lokuphanda ngomrhwebi ngokwakho? Jonga ezona zikhundla ziphezulu ze-5 zase-UK zisebenza ngezantsi.
Ukuqukumbela kwezona Akhawunti zilungileyo zokuSebenza e-UK
Ukuba usifundile isikhokelo sethu yonke le ndlela, kuya kufuneka ngoku ube uqonde ngokupheleleyo ukuba zeziphi iiakhawunti ezisebenzisanayo, zisebenza njani, kwaye yintoni ekufuneka uyijongile ngaphambi kokwenza utyalomali.
Oku kubandakanya yonke into esuka kuhlobo lweeasethi umthengisi akuvumela ukuba utyale imali kuzo, nokuba unako ukufikelela kwiimarike zamanye amazwe, kwaye okona kubalulekileyo- yeyiphi intlawulo oza kuyidinga ukuhlawula urhwebo.
Ngeeakhawunti ezininzi ezisebenzisanayo ngoku kwimarike, senze ukuba inkqubo yophando ibe lula kuwe ngokudwelisa ababoneleli abahlanu abaphezulu be-5.
Yintoni iakhawunti yokujongana nesabelo?
Iakhawunti yokujongana nesabelo ikuvumela ukuba utyale imali kwizabelo, kwiibhondi, kwiimali ezihlanganyelweyo, kwii-ETFs nakwezinye iiklasi zeeasethi ezivela kwinduduzo yekhaya lakho. Iakhawunti ngokwayo inikezelwa ngumthengisi-sitokhwe olawulwayo.
Yeyiphi eyona dipozithi incinci xa uvula iakhawunti yokujongana nesabelo?
Oku kuya kwahluka kwiakhawunti ukuya kwiakhawunti. Ngale nto ithethwayo, ubuncinci omnye wabarhwebi abadweliswe kweli phepha akuvumela ukuba uqalise nge- £ 1 nje.
Zeziphi iintlawulo ezabiwa ngabarhwebi beakhawunti?
Yabelana ngemirhumo yeakhawunti yokujongana iza kuluhlu lweemilo kunye nobukhulu- njengemirhumo yenyanga yeakhawunti, iifizi zentengiso zamanye amazwe, kunye nemirhumo yokuguqula imali. Nangona kunjalo, eyona ntlawulo iphambili ekufuneka uyijongile yintlawulo yokujongana. Oku kubizwa njengentlawulo eguqukayo okanye ethe tyaba ngalo lonke ixesha uthenga okanye uthengisa iasethi.
Ngaba abarhwebi abasebenza ngokuthengiswa kweakhawunti balawulwa?
Ewe, isabelo sokurhweba ngama-akhawunti e-UK silawulwa yi-FCA.
Zeziphi iindlela zokuhlawula ezabelana ngenkxaso kubathengi beakhawunti?
Ngokwesiqhelo ufumana ukhetho lwekhadi ledebhithi okanye ugqithiso lwebhanki. Abarhwebi bahlala bekuvumela ukuba usete ukuhlawulwa kwenyanga ngqo ukuba ufuna ukwenza utyalo mali rhoqo.
Ngaba abarhwebi beakhawunti yokuthengisa bayakuvumela ukuba ufake isicelo?
Hayi, unokufaka isicelo kuphela kumthengisi weCFD okanye iqonga elivela kwimali.
Kufuneka ndenze ntoni xa ndingenamava ngeeakhawunti zokujongana nezabelo?
Kungangcono ukuba uqwalasele ingxowa mali xa ungenamava okutyala imali kwi-intanethi. Ingxowa-mali iya kulawula imali yakho egameni lakho, oko kuthetha ukuba unethuba lokufumana ingeniso yesiqhelo.